Wasiirka Tamarta oo sheegay in Gurmad Biyo dhaamin Deg deg ah looga baahan Yahay Gobolka Gedo.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirka Tamarta oo sheegay in Gurmad Biyo dhaamin Deg deg ah looga...
Dowlada Soomaaliya ayaa mar kale dhawaaq Xoogan ka muujisay biyo la’aanta ka taagan Gobolka gado, sida uu ku dhawaaqat Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xasan Cabdinuur Cabdi oo la hadlayay saxaafada.
Wasiirka ayaa ku baaqay in si deg deg ah gurmad biyo dhaamin loo gaarsiiyo bulshada ku nool Gobolka Gedo.
Sidoo kale Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gacan weyn ka geystaan sidii loogu gurman lahaa walaalaha Soomaaliyeed ee ay biyo la’aantu saameysay.
Previous articleXildhibaan ka tirsan Puntland oo geeriyooday dhaawac culus ka soo gaaray shil gaari oo ka dhacay Gobolka Sanaag.
Next articleGantaalo lagu garaacay qeybo kamid ah waqooyiga Siiriya iyo Ciidamo Tuurky ah,
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Guddoomiye u magacaabay Gobolka Sanaag, Iyadoo Guddoomiyihii...
Laba Maamuul Goboleyd oo Dalka ka maqan oo loo arko kuwa...
Dowlada Kenya oo sheegtay inay qabatay shaqsi Shabaab ka dhacay 20Milion...
Gudoomiyqha Golaha Badbaadinta Qaranka oo ku baaqay in laga Hor tago...